सात ट्रकमाथि कसले गर्यो आगजनी ? पाँच ड्राइभर जले – My Blog
No Comments on सात ट्रकमाथि कसले गर्यो आगजनी ? पाँच ड्राइभर जले
एजेन्सी । भारतको असमको दीमा हसाओ जिल्लामा दियुंगबरा नजिकै अज्ञात मानिसहरुले सात ट्रकमाथि आगजनी गरेका छन् । यसकारण पाँचजना ट्रक ड्राइभरको ज ले र मृत्यु भएको छ । रिपोर्टका अनुसार आगलागी अघि उनीहरुले थुप्रै रा उ न्ड फा य रि ङ पनि गरे । प्रहरीले यसबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यम दैनिक भास्करले बताएको छ ।
← श्रीमती मन नपरेपछि पतिले कोबरा किनेर ल्याए त्यसपछि चाले यस्तो चाल → संसारकै एक अनौठी महिला जसको मुटु नै छैन, बाँचेकी छन् यसरि (७ फोटो र भिडियो सहित)